Kheyraadka Ugu Fiican ee Lagu Kordhiyo Istaraatijiyadaha Wax Ku Qorida Shirkadaha | Martech Zone
Kheyraadka Ugu Fiican ee Lagu Kordhiyo Istaraatijiyadaha Wax Qorista Shirkadahaaga
Talaado, Maarso 13, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Diyaargarowga la hadalka SharpMinds koox ku saabsan Blogging Corporate, waxaan ka soo uruuriyay xoogaa ilo ah oo laga helo goobo badan. Waan murugoon lahaa haddii aanan si cad ugu mahadcelinin iyaga. Sidoo kale, waxaan siinayaa qoraal ku saabsan dadka ilaha leh ilaha iyo isku xirnaanshaha degellada websaydhka dadkan.
Si aan runta kuugu sheego, waagii hore waxaan ka soo horjeeday blogging-ka shirkadaha istiraatiijiyad ahaan. Xaqiiqdii, waxaan qalinka ku duugay ereyga xirid maxaa yeelay taasi badanaa waxay dhacdaa markaad isku daydo inaad istaraatiijiyad ama lagu cabbiro baloog. Adiga ayay kugu noqoneysaa. Waxaan arkay tusaalooyin aad u tiro badan oo wanaagsan oo ku saabsan baloog garaynta shirkadaha si aan uga hor imaado mar dambe. Shirkaduhu runtii qalad ayey sameynayaan haddii aysan tikniyoolajiyaddan uga faa'iideysan qorshahooda guud ee isgaarsiinta.
Maxay u leeyihiin Joogitaanka Blogging Corporate?
Dhawaan waxaan bilaabay inaan ogaado shirkado badan oo qadarinaya waxa balooggu siinayo shirkadaha iyo macaamiishooda, gaar ahaan:
Waxay siisaa shirkadda iyo shaqaalahooda soo-gaadhis ahaan inay yihiin hoggaamiyeyaal fikrad ka haysta wershadooda.
Waxay hagaajineysaa muuqaalka shirkadda. Xaqiiqdii, sida laga soo xigtay tirakoobyada qaarkood, 87% booqashooyinka qaarkood ee websaydhada shirkadda waxay ku sameeyaan halkaa iyada oo loo marayo baloogyada.
Waxay siisaa shaqaalahaaga, macaamiishaada, iyo himilooyinka wejiga aadanaha shirkaddaada.
Waxay ka faa'iideysaneysaa bogga iyo tikniyoolajiyada mashiinka raadinta si loo hagaajiyo shirkaddaada helid internet-ka.
Sidee wax u fulisaa:
Si aad si guul leh u fuliso, waxaa jira talooyin aad u fiican oo ku saabsan shabakadda. Waa kuwan tusaalooyin:
Ka fikir isku dhafka guddi blog ah oo kormeera baloogyada, waxyaabaha ku jira, riixaya kaqeybgalka, iyo ansixinta baloogyada shirkadda.
Ku dhiiri geli bartaada wax ku qora in ay akhriyaan baloogyada oo ay talooyinkooda ka helaan baloogyada. Kheyraadka Suuqgeynta iyo Warsaxaafadeedka waxaa loo arkaa inay yihiin shakhsiyad la'aan waxaana hoos u eegay dadka wax qora ee internetka wax ku qora - badanaa sababta oo ah wareegga, daacad darrada iyo waxyaabaha horay loo ansixiyay.
Qeex mowduuc diirada lagu saaray bartaada, ujeedka, iyo aragtidaada ugu dambaysa. Kuwaan ugula socodsii bartaada si wax ku ool ah oo tilmaam sida loo cabiro guushaada.
Aadaminimo ku samee qoraaladaada una sheeg sheekada. Sheeko sheegistu waa habka ugu wax ku oolka badan ee dadka wax loogu baro farriinta boostadaada. Sheeko-yaqaanno waaweyn ayaa had iyo jeer guuleysta.
Kaqeybqaado kuna biir akhristayaashaada. U oggolow iyaga inay saameyn ku yeeshaan oo ay ka jawaabaan mawduucyadaada oo aad ula dhaqanto si xushmad leh. Ka qaybgal baloogyada kale oo ku xir iyaga. Waa 'meel saameyn ah' oo ay tahay inaad ku xirnaato.
Dhis kalsooni, hay'ad iyo sumcaddaada shaqsiyeed. Si dhakhso leh oo wax ku ool ah uga jawaab. Sidaad kalsooni u dhiseysid, shirkaddaadu sidoo kale way dhismi doontaa.
Dhis dardar. Baloogyada ma aha wax ku saabsan boostada, ee waxay ku saabsan yihiin taxanaha qoraallada. Baloogyada ugu xoogan waxay dhisaan sumcad iyo sumcad adoo riixaya waxyaabaha muhiimka ah si joogto ah.
Waa kan aragtidayda 3da dhidib istiraatiijiyad qoris weyn oo kooban, Saddexagalka Blogging:
Mid ka mid ah raadraaca ayaa faallo ka bixiyay boostada in naqshadeynta ay ka maqnayd istiraatiijiyadda guud. Markaan ka hadlayno Istaraatijiyadaha Blogging Corporate, Waxaan aaminsanahay in nashqadu ay aad muhiim u tahay - laakiin ay sii cayimeen Suuqgeyn. Waxaan jeclaan lahaa in shirkad ay horeyba u laheyd naqshad websaydh weyn iyo joogitaan intaan loo quusin qorista. Haddii kale, waxay ku darayaan liiska!
Khataro noocee ah ayaa jira?
Kulan kooxeedkii ugu dambeeyay ee buugga, waxaan weydiinnay mid ka mid ah kaqeybgalayaasheena, qareen, waxa sharci ahaanta u ah ee la xiriira shaqaalaha wax qora. Wuxuu yiri asal ahaan waxay la mid tahay halista shaqaalahaas uu ka hadlayo meel kasta oo kale. Xaqiiqdii, buugaagta shaqaaluhu badankood waxay daboolaan filashooyinka ficilada shaqaalahaas. Haddii aadan haysan buug-gacmeed shaqaale oo daboolaya habdhaqanka laga filayo shaqaalahaaga, laga yaabee inaad adigu tahay! (Iyadoo aan loo eegin barta internetka).
Waa tan tixraac fantastik ah oo ku saabsan HA QAADAN, hana u samayn 'blogging' marka laga eego dhinaca sharciga.
Qaar ka mid ah waxyaabaha dheeriga ah ee laga wada hadlayo:
Sideed ula dhaqmi doontaa dhaleeceynta, iska horimaadyada xun, iyo faallooyinka? Waxaa lagugula talinayaa inaad hore u dhigto waxyaabaha laga filayo sida faallooyinka loo dhexdhexaadin doono loona aqbali doono bartaada internetka. Waxaan ku dhiirigalin lahaa siyaasada faallooyinka ee ku saabsan barta internetka ee shirkadeed.
Sideed u xaqiijin doontaa xakameynta sumadda? Uma baahnid dadka wax ku qora ee wax ku qoraya hal ku dhigyo, astaamo, ama codka astaantaada. Ka dhig gacmaha.
Sideed ula macaamili doontaa bartaada wax ku qorta ee aan wax soo saar lahayn? Dadka wax qoraya ee wax qoraya internetka ha ka aqbalaan siyaasad intaan gacanta la gelin halkaasoo ka qaybqaadashadu aysan qasab ahayn oo keliya, laakiin dib u dhaca gadaal ayaa uga kici doona iyaga soo-bandhigid. Sii bootada! Joogtaynta wax soo saar isdaba joog ah oo mawduucyo ah ayaa fure u ah istaraatiijiyad kasta oo wax lagu qoro.
Sideed ula macaamili doontaa soo-gaadhista hantida aqooneed ee fure u ah ganacsiga shirkadda?
Buugaagta laga Akhriyo Mawduuca:
Blogging Corporate for Dummies - Aniga ayaa qoray!
Buugga Blogging Corporate: Gabi ahaanba waxkasta oo aad ubaahantahay inaad ogaato si aad uguhesho sax.
Aborijiniska Dijital ah: Jihada Ganacsi Hadda: Dabeecad, Reer guuraa, iyo Isbeddel weligiis ah.
Wadahadal qaawan: Sida Blog-yada ay u badalayaan Qaabka Ganacsiyadu ula Hadlaan Macaamiisha.
Talo-siinta Blogging Corporate iyo Kheyraadka
Dhammaan macluumaadka aan ku soo ururiyey qoraalkan waxaa lagu dhiirrigeliyey mid ka mid ah xiriiriyeyaasha badan ee kor ku xusan ama liiskaan hoose. Waxaa jiray qoraallo aad u tiro badan oo loo tixraacay si faahfaahsan looga bixiyo halkan. Waxaan soo uruuriyay macluumaad intii karaankeyga ah waxaanan isku dayay inaan isku geeyo hal qoraal oo bixin doona aragti guud oo ku saabsan dhowr khubaro aragtiyahooda ku saabsan istaraatiijiyadaha baloogyada shirkadaha. Waxaan rajeynayaa in milkiilayaasha boggagani ay qadarinayaan - waxay u qalmaan dhammaan sumcadda qoraalkan!
Waxaan ku dhiirigalin lahaa qof kasta oo booqanaya inuu waqti ku qaato mid kasta oo ka mid ah baloogyadan. Iyagu waa kheyraad aan caadi aheyn!
Sida loo Bilaabo Blog
Barashada Guusha Blogging-ka ee Jaamacadda Woqooyi-bari
Gudaha 'Squarespace Insider'
Blog Suuq-geynta Diva
Abuuritaanka Isticmaalayaal Xamaasad Leh
Tusaalooyinka Blogging Corporate
Qoraalkani ma dhammaystirmi doono iyada oo aan qaar la siinin Blogging Corporate xiriiriyeyaasha. Qaarkood waa rasmiga ah baloogyada shirkadaha laakiin waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay in la fiiriyo aan rasmi ahayn blogyada shirkadaha sidoo kale. Waxay bixisaa xoogaa caddayn ah haddii aad go'aansato inaadan wax ka qorin shirkaddaada ama magacaaga, qof kale ayaa laga yaabaa!
Blogs Shabakadaha Horumarinta Microsoft
Rasmiga Google Blog
Matt Cutts: Qalabka, Google iyo SEO
Blog aan rasmi ahayn DreamHost
Meesha aan fadhiisto
Yahoo Raadinta Blog
Isku-hagaajinta Raadinta Blogging Corporate
Ganacsiyada iyo macaamiisha waxay baareyaan iibsashadooda internetka ee xigta iyagoo adeegsanaya waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo baloogyada shirkaduhu waxay bixiyaan macluumaadkaas Taasi waxay tiri, waxaa jira talaabooyin ay tahay inaad qaado si aad labadaba u hagaajiso bartaada (sida caadiga ah WordPress) iyo sidoo kale waxyaabaha aad ka kooban tahay. Markaad rooga gaduudka u rogto Google, waxay tusinayaan waxa aad ka kooban tahay waxayna si ballaadhan u ballaadhinaysaa gaadhista maaddadaada. Bryant Tutterow wuxuu qoray taxane ku saabsan hagaajinta bartaada - hubso inaad ka aqriso oo wac DK New Media haddii aad caawimaad u baahan tahay
Fadlan xor u noqo inaad faallo ka bixiso oo aad ku darto xiriiriyeyaasha Blogging Corporate ee aad jeceshahay!
Tags: hubkaaHagayaasha bloggingilaha qoraalkablogging shirkadahatusaalooyinka shirkadayntablogging shirkado loogu talagalay dummitershagitaanada blogging-ka shirkadahaIstaraatijiyadaha qorista shirkadaha
Wikinomics: Sidee Wadashaqeyntu Mass U Badali Doontaa Ganacsiga
Ma jiro Qof Dan ka Leh Blog-kaaga!
Mar 13, 2007 at 9: 46 PM
waad ku mahadsan tahay tixraaca barashada guusha ee qorista. Aniga oo ah mid ka mid ah labada qoraa ee hormoodka ka ah daraasadda, waxay ahayd ujeedkeennu inaan ka caawinno bulshada talooyinka qaarkood ee ku saabsan guusha buugaagta.
Mar 13, 2007 at 10: 15 PM
Waa daraasad cajiib ah. Waan ka soo dhex maray laakiin ma sugi karo inaan aad ugu sii qodo. Waxaad qabatay adeeg weyn adoo siinaya tan! Wanaagsan!
Mar 14, 2007 at 1: 57 AM
Ka fikir isku dhafka guddi blog ah oo […] u oggolaada baloogyada shirkadda.
Marka asal ahaan baloogyada shirkaduhu waxay noqon doonaan urururin maalinle ah / toddobaadle ah oo ku saabsan hadalka suuq-geynta? Sida aad adigu leedahay:
Kheyraadka Suuqgeynta iyo Warsaxaafadeedka waxaa loo […] hoos loo eegay […] sababo la xiriira […] hore loo ansixiyay.
Waxaan u maleynayaa inaad diyaar u tahay inaad furnaato mooyee oo aadan si fudud u tirtirin faallooyinka xun, shirkad sidoo kale waxay ku adkeysan kartaa istiraatiijiyaddii hore ee webka. Sida istiraatiijiyad lagu hagaajinayo darajada raadinta ayaa loo ogaan doonaa sida ugu fudud.
Mar 14, 2007 at 2: 06 AM
Aqrintii labaad faaladaydii ugu dambeysay waxay umuuqatay mid aan fiicnayn. Taasi ujeedku ma ahayn. Qoraal weyn oo aad qortay, Douglas.
Kaliya waxaan tilmaamayay in shirkad ay u aragto baloog wax kabadan uun aalad kale oo suuqgeyn ah. Waa marin toos ah oo loogu talagalay macaamilka, laakiin waa keliya haddii loo isticmaalo a) si furan iyo b) oo ah qalab isgaarsiineed oo laba dhinac ah.
Mar 14, 2007 at 6: 44 AM
Anigu uma qaadan diidmo, Martin. Waan kugu raacsanahay… Uma maleynayo in Guddi Blog ah ay tahay inay ansixiyaan qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha ku jira - laakiin waxaan u maleynayaa in guddi ay tahay inay waqti qaadato si loo hubiyo in baloogyada ay ku sii nagaanayaan waxyaabaha ku jira, iyagoo bixinaya talooyin iyo jawaab celin, isla markaana sii wadaya dardar.
Waan ku raacsanahay - haddii guddiga balooggu ay dib-u-eegis ku samaynayaan, tifaftirayaan, oo ay dib u eegayaan waxyaabaha ku jira - baloogga ayaa lumi doona kalsoonidiisa iyo aqrintiisa habeen-ka-dhan. Waan hubaa inaan ku cadeyn doono taas casharkeyga.
Waxaan sidoo kale ku raacsanahay… haddii aad si joogto ah u dhex gasho suuqgeynta iyo PR wareejinta iyada oo qayb ka ah istiraatiijiyaddaada blogging, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale ilaaliso degel internet ah!
Mar 14, 2007 at 8: 18 PM
Doug - boostada weyn! Waxaan ka shaqeynayaa sameynta baloog shirkadeed hadda waxaanan helay ilo badan oo aan ugu isticmaalo boostadan. Shaqo wacan - mahadsanid!
Mar 14, 2007 at 8: 25 PM
Aad ayaad u mahadsantahay, Patrick! Waxaan qabaa a download sidoo kale, haddii aad jeclaan lahayd inaad isticmaasho. Waxaan kaliya dhigay caawa (ka dib markii daabacay xidhmooyin at Kinkos berrito)
Jun 11, 2007 at 11: 11 PM
Waxaan xiiseynayay inaan helo nuqul adag ama wax aan daabacan karo daraasaddaas. Aniga oo xiiso ii leh in aan tan ula imaado macaamiisha.
Waxaan u maleynayaa in mid ka mid ah macaamiisheyda waaweyn uu dhisi karo "xirid"
13, 2007 at 10: 05 PM
Way fiicnaan laheyd haddii qaar ka mid ah tusaalooyinka baloogyada shirkadaha ay ka yimaadaan shirkadaha aan farsamada ahayn.
14, 2007 at 2: 54 AM
Taasi waa jawaab celin weyn, yiu! Runtii waxaan u baahanahay inaan soo jiito tusaalooyin kale oo dheeraad ah. Waxaan u maleynayaa inay jiraan tan tan wakaaladda socdaalka.
Aug 6, 2015 at 10: 57 AM
Blogging-ka shirkad ahaan xeelad ahaan waa fikrad aad u wanaagsan.
Halkii aan u adeegsan lahayn warbaahinta bulshada si aan kor ugu qaadno ganacsiga, waa inaan bilownaa dhisida baloog ay ku lug leeyihiin waxyaabo badan sida qorista maqaallo soo jiita dareenka dadweynaha ama macmiilka iman kara, doorashada saxda ah ee cinwaannada oo ugu muhiimsanna aan siino maqaal qiimo leh akhristayaasha.
Tani waxay kaa caawin doontaa inaad in badan ku sii nagaato suuqa isla markaana aad kor u qaaddo ganacsigaaga.
Skytech - Blogger ka yimid Malaysia